Oil Mining 3D Apk Dhawunirodha Ye Android [Game] - Luso Gamer
Oil Mining 3D Apk Dhawunirodha Ye Android [Game]
Migodhi yaigara iri nzira yekubata maziso. Iko makambani anoshandisa maitiro ekuchera marasha, zvicherwa neoiri. Nhasi pano taunza iyi gameplay inoshamisa inozivikanwa seOil Mining 3D. Mukati mevatambi vemitambo vanoda kuendesa michina yavo yemugodhi.
Kunyange zvazvo nzira yekuchera mafuta inogara ichionekwa senzira inodhura. Asi iyo profit margin inopfuura nzira yatinotarisira. Saka iwe unogara uchinakidzwa nekuita. Uye wakagadzirira kuvaka yako kambani uye uwane purofiti isingaperi.
Ipapo isu tinokurudzira avo mafeni kuti vatore 2D Gameplay kubva pano. Izvo zvinosvikika kuwana kubva pano nekudzvanya kumwe chete. Rangarira kuti vanogadzira vari kuronga kuwedzera dzimwe sarudzo nyowani mukati uye idzo dzinogona kuwanikwa mukuvandudza kuri kuuya.
Chii chinonzi Oil Mining 3D Apk
Oiri Migodhi 3D Android ndeye online simulation yakavakirwa mutambo. Iko kune vatambi vanoda kugadzira pamwe nekusimudzira zvidyarwa zvavo zvemigodhi. Saka vanogona kutora mafuta akawanda kubva pasi. Uye wobva wawana purofiti ipapo pasina kunetseka.
Kunyangwe mizhinji yemitambo yakasiyana inogona kutamba kunze uko. Asi kana zvasvika pakunakidzwa nemutambo wemigodhi uko vatambi vanogona kunakidzwa nekuwana max purofiti ipapo. Zvadaro tinokurudzira kuti vatambi vacho vaise uye vaongorore iyi gameplay chaiyo.
Kuita kuti mutambo uwedzere kunakidza, vanogadzira vanodyara izvi zvakasiyana siyana. Izvi zvinosanganisira kudhirowa, kunatsa uye yakananga kutengesa sarudzo mukati memusika. Zvinoreva kuti vatambi vakawana kutonga kwakazara pamusoro pemaitiro.
Kana iwe waigara uchishuvira kuva bhirioni. Asi zvinoita sezvisingabviri nekuda kwekushaikwa kwezvekushandisa. Ipapo zvino vateveri vanogona kuzadzisa chiroto chavo nekutora chikamu mumutambo. Izvo ndezvemahara kurodha uye hazvidi kunyoreswa kana kunyoresa kutamba.
zita Oiri Mining 3D
zera 77.52 MB
Developer Sravana Sameeralu Serial XNUMXth Sablo Studio
Package Zita com.sablostudio.oil.mining
Mutambo wemutambo unotanga nechidimbu chemidziyo iri nyore. Uko vatambi vakashongedzerwa neoiri imwe chete yekudhonza. Avo vanoda kuenderera mberi nekuongorora sarudzo itsva. Inoda kusimudzira uye kuvhura zvirinani zvishandiso.
Kunyangwe zvese izvi zvepamberi zvishandiso zvinosvikika kuwana kubva gameplay chitoro. Asi kuvhura nekusimudzira zviwanikwa izvozvo zvinoda mari. Kunyangwe matombo anokosha anodiwa kuti uvhure zvishandiso zvazvino izvo zvinonyanya kushandiswa kudhirowa maitiro.
Mutengo wakananga wekuvhura zviwanikwa izvozvo unodhura. Iyo yemahara nzira yekuvhura izvo zvinhu ndeyekutengesa mafuta muhuwandu hwakawanda uye kuwana purofiti yakanaka. Avo vanoda kuziva nezvekuwedzera uye vanowana mabhiriyoni muchidimbu.
Zvinokurudzirwa kuisa mari chaiyo kuti uwane matombo anokosha. Wobva washandisa iwo matombo anowanikwa kuvhura akasiyana azvino michina. Izvo zvinotora mamwe mafuta nemamineral pasina chero basa rakaoma. Pane mamwe makiyi ekusimudzira anodiwa paunenge uchitamba mutambo.
Ehe, pasina kusimudzira izvo zvinhu hazvigoneke kuenda zvakafara. Saka wagadzirira kuve tycoon yemafuta uye kuwana purofiti isingaperi. Ipapo isu tinokurudzira avo mafeni kuisa Oiri Mining 3D Dhawunirodha mukati me smartphone nekudzvanya kumwe chete.
Kuisa mutambo kunopa iyi yakakwana chikuva.
Iko vatambi vanogona kuve bhizinesi tycoon.
Edza kudyara max oiri ekunatsa michina.
Simudzira midziyo nenguva pasina kutambisa nguva.
Gems uye Mari inodiwa pakuvhura zvinhu zvichangoburwa.
Kuona ads kunobatsira mukuwanza purofiti yawawana.
Izvi zvinoreva kuti gameplay inotsigira wechitatu ads.
Simudza iyo performance tapping muchina.
Maitiro ekurodha Oil Mining 3D Game
Iyo yazvino vhezheni yegameplay inowanikwa kubva kuPlay Store. Asi nekuda kwezvimwe zvirambidzo zvakakosha, vatambi vazhinji havakwanise kuwana Apk faira zvakananga. Saka chii chinofanira kuitwa nevatambi veAndroid mumamiriro ezvinhu akadaro kana vasingakwanisi kuwana mutambo wakananga?
Saka unovhiringika uye uchitsvaga yakanakisa imwe sosi. Inofanirwa kushanyira webhusaiti yedu uye kurodha yakagadziridzwa vhezheni yeApk zvakananga nekudzvanya imwe sarudzo. Ingodzvanya pane yakapihwa link uye unakirwe negameplay pasina chero chinorambidzwa.
Iyo yemitambo app inowanikwa kuti uwane kubva kuGoogle Play Store. Kuvapo kwefaira reapp pamusoro pechitoro chekutamba kunoratidza kunaka kweApk faira. Kunyangwe isu takatoisa iyo yekutamba application pamusoro pemafoni akasiyana. Mushure mekuisa mutambo takaona uri nyore uye ndeyechokwadi kutamba.
Mazhinji mamwe akafanana 2D Mitambo yakaburitswa pano pane yedu webhusaiti. Kuti uongorore uye unakirwe iwo akanakisa mamwe emitambo yemitambo ndapota isa anotevera maApk mafaera. Ndivo Pop Ninja Apk uye Tinya Tap Breaking Apk.
Saka iwe unoda mitambo yakadaro yakazara uye yakabatana. Ikoko zviwanikwa zvakabatanidzwa zvakananga nezvimwe zvinhu. Kana iwe uchida kudzidza maitiro uye wakagadzirira kuve tycoon yemusika wemafuta. Wobva wadhawunirodha uye isa Oiri Mining 3D Apk mukati me smartphone.
Categories Simulation, Games Tags 2D Mutambo, Oiri Mining 3D, Oiri Kuchera 3D Apk, Oiri Kuchera 3D Dhawunirodha, Oiri Mining 3D Game Post navigation
BitLife BR Apk Dhawunirodha Ye Android [Nhau Game]